Met Gala 2019 ကို တက်ရောက်လာတဲ့ ဟောလိဝုဒ်အနုပညာရှင်တွေရဲ့ အလန်းစားဖက်ရှင်အဆန်းများ - For her Myanmar
ကြမ်းပေ့ ဆန်းပေ့ဆိုတဲ့ ဖက်ရှင်ပုံရိပ်တွေချည်းပဲနော်…
ယောင်းတို့ရေ … Met Gala ဆိုတာ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း နယူးယောက်မြို့၊ မက်ထရိုပိုလီတန် အနုပညာပြတိုက်မှာ အမိုက်စားကျင်းပနေကျဖြစ်တဲ့ ဖက်ရှင်ပြပွဲကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Met Gala မှာ အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ ဟောလိဝုဒ် အနုပညာရှင်တွေက နာမည်ကျော်ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းနာတွေရဲ့ ဖန်တီးမှုအသစ်အဆန်းတွေကို အပြိုင်အဆိုင်ဝတ်စားပြီး ပွဲတက်ကြတာကို တွေ့ရမှာပါ။ တစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်မတူညီတဲ့ theme ခေါင်းစဉ်တစ်ခုထွက်ပြီး အဲဒီခေါင်းစဉ်အလိုက် ဖက်ရှင်တွေထွင်ဝတ်ကြတာမို့ တစ်ကမ္ဘာလုံးက ဖက်ရှင်ပရိသတ်တွေ တစ်ခုတ်တစ်ရစောင့်ကြည့်ရတဲ့ပွဲကြီးပေါ့။
ဒီနှစ်ရဲ့ Met Gala theme ကတော့ “Camp” တဲ့။ ကဲ … ဒါဆို ဒီခေါင်းစဉ်အလိုက် နာမည်ကျော် အနုပညာရှင်တွေ ဘယ်လိုဖက်ရှင်အလန်းတွေနဲ့ Met Gala ပွဲကြီးကို တက်ရောက်ခဲ့ကြလဲဆိုတာ Stella နဲ့ တူတူကြည့်လိုက်ကြစို့…
Jenner ညီအစ်မတွေကတော့ ထုံးစံအတိုင်းဖက်ရှင်ဘုရင်မတွေပါပဲနော်။ နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ ဝတ်စုံတွေကို ကမ္ဘာကျော်ဖက်ရှင်ဘရန်းဒ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Versace က တီထွင်ဆန်းသစ်ပေးထားတာပါ။ ဒီဝတ်စုံတွေရဲ့အိုင်ဒီယာကတော့ စင်ဒရဲလားပုံပြင်ထဲက မိထွေးရဲ့သမီးနှစ်ယောက်ကို မှီငြမ်းထားတာပါတဲ့။
Related article >>> ကမ္ဘာကျော်ဖက်ရှင်အမှတ်တံဆိပ်တွေရဲ့ နောက်ကွယ်က စိတ်ဝင်စားစရာ ပုံပြင်တွေ
Titanic ရုပ်ရှင်ထဲက “My Heart Will Go On” သီချင်းရဲ့အဆိုရှင် Celine Dion ရဲ့ ဝတ်စုံက ပုတီးစေ့တွေကို ကျွမ်းကျင်လက်ပန်းထိုးဆရာ (၅၂) ယောက်က အချိန်နာရီ (၃၀၀၀) ယူပြီးထိုးထားရတာပါတဲ့။ ဝတ်စုံရဲ့အလေးချိန်ကချည်းပဲ (၂၂) ပေါင် လေးတယ်ဆိုပဲ။
Joker လို့ လူသိများတဲ့ Jared Leto ကိုတော့ ဒီနှစ်မှာ ခရစ်စတယ်လ်တွေ စီခြယ်ထားတဲ့ Gucci ရဲ့ အနီရောင်ဝတ်စုံနဲ့ ပွဲတက်လာတာ တွေ့ရမှာပါ။ ထူးခြားတာကတော့ Jared က သူ့ရဲ့ ပုံတူခေါင်းကြီးပိုက်လာတာပါပဲ။ ဒီဖက်ရှင်က Gucci ရဲ့ Fall 2018 collection ကို မြင်ဖူးပြီးသားလူတွေအတွက်တော့ အဆန်းမဟုတ်တော့ဘူးထင်ပါတယ်။
ဘာဘီရုပ်လေးလို တစ်ကိုယ်လုံးပန်းရောင်တွေပဲ ဝတ်ဆင်ထားတဲ့အပြင် ဘာဘီကားပန်းရောင်ကြီးစီးလာပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ အာရုံကို ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့သူကတော့ Kacey Musgraves ပါ။ လက်ထဲမှာလည်း hair dryer ပုံစံ လက်ကိုင်အိတ်ကို ကိုင်ထားလေရဲ့။ ဒီဝတ်စုံရဲ့ ဖန်တီးသူ ဒီဇိုင်းနာကတော့ Moachino ကပါတဲ့။
Ezra တို့ကတော့ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပါပြီ။ Burberry ရဲ့ ခပ်မိုက်မိုက်ဝတ်စုံနဲ့အတူ မျက်နှာပေါ်မှာ မျက်လုံးခုနစ်လုံးရေးဆွဲပြီး ပွဲတက်လာတဲ့ Ezra Miller ကြောင့် ပရိသတ်တွေ အံ့အားသင့်ရပြန်ပါပြီ။ ဒီဖက်ရှင်ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ “All eyes on you” (လူတိုင်းရဲ့အကြည့်တွေမခွာနိုင်ဖို့) ပါတဲ့။ တကယ်လည်း မခွာနိုင်တော့ပါဘူးရှန်။ (ကြည့်လေ မူးလေပါပဲ -_- )
အင်း …ကိုယ်တွေနိုင်ငံမှာ မီးခဏခဏပျက်နေတာကိုများ ကိုယ်စားပြုထားသလား ထင်ရစေတဲ့ ဝတ်စုံကတော့ Katy Perry ရဲ့ ဝတ်စုံပဲပေါ့။ ပရိသတ်တွေရဲ့ အာရုံစိုက်မှုကို ရရှိခဲ့တဲ့ ဒီမီးဆိုင်းပုံစံဝတ်စုံကို ဖန်တီးခဲ့သူကတော့ Moschino ကပါ။ ခရစ်စတယ်လ်တွေ တွဲလောင်းချပြီး ဖယောင်းတိုင်တွေ စိုက်ထားသလို ထွင်ထားတာဆိုတော့ တော်တော်တော့လက်ဝင်မယ်ထင်ပါတယ်။
Lady Gaga ဆိုတာနဲ့ ဖက်ရှင်အဆန်းကြီးတွေ မြင်ရတော့မယ်ဆိုတာ ပရိသတ်တော်တော်များများသိထားပြီးသား မဟုတ်လား ? ဒီနှစ် Met Gala မှာတော့ Lady Gaga က ပန်းဆီရောင်တောက်တောက်ဝတ်စုံဖောင်းဖောင်းနဲ့ပွဲတက်လာတဲ့အပြင် အနောက်မှာလည်း ထီးတော်မိုးတွေပါလာသေးလေရဲ့။ ကြည့်နေတုန်းမှာပဲ ဝတ်စုံကိုချွတ်ချလိုက်တော့ အောက်မှာ အနက်ရောင်ဝတ်စုံတစ်စုံပေါ်လာပါလေရော။ ဒါပဲလားဆိုတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ ထပ်ချွတ်လိုက်တဲ့အခါတိုင်း ဝတ်စုံအသစ်တစ်စုံစီပေါ်လာတော့တာပါပဲ။ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းနာ Brandon Maxwell ရဲ့လက်ရာဖြစ်ပြီး ဒီဝတ်စုံကပဲ Met Gala ကို သိမ်းပိုက်လိုက်တာပါ။
ကဲ … ဒါတွေကတော့ ၂၀၁၉ Met Gala မှာ တွေ့ရတဲ့ အနုပညာရှင်တွေရဲ့ အကြမ်းဆုံး အလန်းဆုံးဖက်ရှင်တွေပါပဲ။ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းနာချင်း၊ ကမ္ဘာကျော်ဘရန်းဒ်ချင်း အကြိတ်အနယ် အပြိုင်အဆိုင် တီထွင်ဆန်းသစ်ထားတဲ့ဖက်ရှင်တွေမို့လို့ ယောင်းတို့လည်း မျက်စိကျကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ယောင်းတို့ရဲ့ အကြိုက်ဆုံးဖက်ရှင်တွေကိုလည်း ကောမန့်မှာ ပြောပြာသွားပေးဖို့ မမေ့နဲ့ဦးနော် …
References : Harper’s BAZZAR , Vogue , Elle
ကွမျးပေ့ ဆနျးပဆေို့တဲ့ ဖကျရှငျပုံရိပျတှခေညျြးပဲနျော…
ယောငျးတို့ရေ … Met Gala ဆိုတာ နှဈစဉျနှဈတိုငျး နယူးယောကျမွို့၊ မကျထရိုပိုလီတနျ အနုပညာပွတိုကျမှာ အမိုကျစားကငျြးပနကေဖြွဈတဲ့ ဖကျရှငျပွပှဲကွီးတဈခုဖွဈပါတယျ။ Met Gala မှာ အောငျမွငျကြျောကွားတဲ့ ဟောလိဝုဒျ အနုပညာရှငျတှကေ နာမညျကြျောဖကျရှငျဒီဇိုငျးနာတှရေဲ့ ဖနျတီးမှုအသဈအဆနျးတှကေို အပွိုငျအဆိုငျဝတျစားပွီး ပှဲတကျကွတာကို တှရေ့မှာပါ။ တဈနှဈနဲ့တဈနှဈမတူညီတဲ့ theme ခေါငျးစဉျတဈခုထှကျပွီး အဲဒီခေါငျးစဉျအလိုကျ ဖကျရှငျတှထှေငျဝတျကွတာမို့ တဈကမ်ဘာလုံးက ဖကျရှငျပရိသတျတှေ တဈခုတျတဈရစောငျ့ကွညျ့ရတဲ့ပှဲကွီးပေါ့။
ဒီနှဈရဲ့ Met Gala theme ကတော့ “Camp” တဲ့။ ကဲ … ဒါဆို ဒီခေါငျးစဉျအလိုကျ နာမညျကြျော အနုပညာရှငျတှေ ဘယျလိုဖကျရှငျအလနျးတှနေဲ့ Met Gala ပှဲကွီးကို တကျရောကျခဲ့ကွလဲဆိုတာ Stella နဲ့ တူတူကွညျ့လိုကျကွစို့…
Jenner ညီအဈမတှကေတော့ ထုံးစံအတိုငျးဖကျရှငျဘုရငျမတှပေါပဲနျော။ နှဈယောကျလုံးရဲ့ ဝတျစုံတှကေို ကမ်ဘာကြျောဖကျရှငျဘရနျးဒျတဈခုဖွဈတဲ့ Versace က တီထှငျဆနျးသဈပေးထားတာပါ။ ဒီဝတျစုံတှရေဲ့အိုငျဒီယာကတော့ စငျဒရဲလားပုံပွငျထဲက မိထှေးရဲ့သမီးနှဈယောကျကို မှီငွမျးထားတာပါတဲ့။
Related article >>> ကမ်ဘာကြျောဖကျရှငျအမှတျတံဆိပျတှရေဲ့ နောကျကှယျက စိတျဝငျစားစရာ ပုံပွငျတှေ
Titanic ရုပျရှငျထဲက “My Heart Will Go On” သီခငျြးရဲ့အဆိုရှငျ Celine Dion ရဲ့ ဝတျစုံက ပုတီးစတှေ့ကေို ကြှမျးကငျြလကျပနျးထိုးဆရာ (၅၂) ယောကျက အခြိနျနာရီ (၃၀၀၀) ယူပွီးထိုးထားရတာပါတဲ့။ ဝတျစုံရဲ့အလေးခြိနျကခညျြးပဲ (၂၂) ပေါငျ လေးတယျဆိုပဲ။
Joker လို့ လူသိမြားတဲ့ Jared Leto ကိုတော့ ဒီနှဈမှာ ခရဈစတယျလျတှေ စီခွယျထားတဲ့ Gucci ရဲ့ အနီရောငျဝတျစုံနဲ့ ပှဲတကျလာတာ တှရေ့မှာပါ။ ထူးခွားတာကတော့ Jared က သူ့ရဲ့ ပုံတူခေါငျးကွီးပိုကျလာတာပါပဲ။ ဒီဖကျရှငျက Gucci ရဲ့ Fall 2018 collection ကို မွငျဖူးပွီးသားလူတှအေတှကျတော့ အဆနျးမဟုတျတော့ဘူးထငျပါတယျ။
ဘာဘီရုပျလေးလို တဈကိုယျလုံးပနျးရောငျတှပေဲ ဝတျဆငျထားတဲ့အပွငျ ဘာဘီကားပနျးရောငျကွီးစီးလာပွီး ပရိသတျတှရေဲ့ အာရုံကို ဖမျးစားနိုငျခဲ့သူကတော့ Kacey Musgraves ပါ။ လကျထဲမှာလညျး hair dryer ပုံစံ လကျကိုငျအိတျကို ကိုငျထားလရေဲ့။ ဒီဝတျစုံရဲ့ ဖနျတီးသူ ဒီဇိုငျးနာကတော့ Moachino ကပါတဲ့။
Ezra တို့ကတော့ လုပျခလြိုကျပွနျပါပွီ။ Burberry ရဲ့ ခပျမိုကျမိုကျဝတျစုံနဲ့အတူ မကျြနှာပျေါမှာ မကျြလုံးခုနဈလုံးရေးဆှဲပွီး ပှဲတကျလာတဲ့ Ezra Miller ကွောငျ့ ပရိသတျတှေ အံ့အားသငျ့ရပွနျပါပွီ။ ဒီဖကျရှငျရဲ့ အဓိပ်ပါယျကတော့ “All eyes on you” (လူတိုငျးရဲ့အကွညျ့တှမေခှာနိုငျဖို့) ပါတဲ့။ တကယျလညျး မခှာနိုငျတော့ပါဘူးရှနျ။ (ကွညျ့လေ မူးလပေါပဲ -_- )
အငျး …ကိုယျတှနေိုငျငံမှာ မီးခဏခဏပကျြနတောကိုမြား ကိုယျစားပွုထားသလား ထငျရစတေဲ့ ဝတျစုံကတော့ Katy Perry ရဲ့ ဝတျစုံပဲပေါ့။ ပရိသတျတှရေဲ့ အာရုံစိုကျမှုကို ရရှိခဲ့တဲ့ ဒီမီးဆိုငျးပုံစံဝတျစုံကို ဖနျတီးခဲ့သူကတော့ Moschino ကပါ။ ခရဈစတယျလျတှေ တှဲလောငျးခပြွီး ဖယောငျးတိုငျတှေ စိုကျထားသလို ထှငျထားတာဆိုတော့ တျောတျောတော့လကျဝငျမယျထငျပါတယျ။
Lady Gaga ဆိုတာနဲ့ ဖကျရှငျအဆနျးကွီးတှေ မွငျရတော့မယျဆိုတာ ပရိသတျတျောတျောမြားမြားသိထားပွီးသား မဟုတျလား ? ဒီနှဈ Met Gala မှာတော့ Lady Gaga က ပနျးဆီရောငျတောကျတောကျဝတျစုံဖောငျးဖောငျးနဲ့ပှဲတကျလာတဲ့အပွငျ အနောကျမှာလညျး ထီးတျောမိုးတှပေါလာသေးလရေဲ့။ ကွညျ့နတေုနျးမှာပဲ ဝတျစုံကိုခြှတျခလြိုကျတော့ အောကျမှာ အနကျရောငျဝတျစုံတဈစုံပျေါလာပါလရေော။ ဒါပဲလားဆိုတော့ မဟုတျသေးပါဘူး။ ထပျခြှတျလိုကျတဲ့အခါတိုငျး ဝတျစုံအသဈတဈစုံစီပျေါလာတော့တာပါပဲ။ ဖကျရှငျဒီဇိုငျးနာ Brandon Maxwell ရဲ့လကျရာဖွဈပွီး ဒီဝတျစုံကပဲ Met Gala ကို သိမျးပိုကျလိုကျတာပါ။
ကဲ … ဒါတှကေတော့ ၂၀၁၉ Met Gala မှာ တှရေ့တဲ့ အနုပညာရှငျတှရေဲ့ အကွမျးဆုံး အလနျးဆုံးဖကျရှငျတှပေါပဲ။ ဖကျရှငျဒီဇိုငျးနာခငျြး၊ ကမ်ဘာကြျောဘရနျးဒျခငျြး အကွိတျအနယျ အပွိုငျအဆိုငျ တီထှငျဆနျးသဈထားတဲ့ဖကျရှငျတှမေို့လို့ ယောငျးတို့လညျး မကျြစိကကြွမယျထငျပါတယျ။ ယောငျးတို့ရဲ့ အကွိုကျဆုံးဖကျရှငျတှကေိုလညျး ကောမနျ့မှာ ပွောပွာသှားပေးဖို့ မမနေဲ့ဦးနျော …
Tags: brands, celebrity, Designer, Fashion, fashionista, Hollywood, luxury, met gala 2019